Outlook ကိုပြန်လည်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုမည်သို့အတင်းဖိအားပေးသနည်း။ - Microsoft Outlook
အဓိက > Microsoft Outlook > Outlook 2013 ပြန်လည်စတင်ရန် - ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းများ
Outlook 2013 ပြန်လည်စတင်ရန် - ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းများ
Ctrl-Alt-Delete ကို နှိပ်၍ _ Start Task Manager ကိုရွေးပါ။
အပေါ်ညာဖက်ကလစ်နှိပ်ပါ tOutlook2007 ခုနှစ် 'ဟုအဆိုပါ Applications ကို tab ကိုအပေါ်။
Windows start orb ကိုနှိပ်ပြီး search box တွင် 'Run ' ကိုရိုက်ပါ။
မင်္ဂလာပါ Windows Universe! မိုက်ကယ်က ၀ င်းဒိုးကလပ်နှင့်အတူ။
ယခုတွင် Windows သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များကိုဆက်လက်ထုတ်ဝေလျှက်ရှိသည်။ ကောင်းပြီ၊ ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကိုအစဉ်မပြတ်တီထွင်။ အယူအဆအသစ်များနှင့်အယူအဆများနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေး protocol များဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်ကောင်း၏။ ဆိုးကျိုးကတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာသင်ရှိပြီးသား applications များကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမှားအီးမေးလ်များကိုထပ်တူပြုခြင်းမပြုစေခြင်းငှါအရာ Microsoft Outlook နဲ့ပြanနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌အီးမေးလ်အသစ်များကိုပို့ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းမပြုသည့်အခါ Outlook ကိုပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများကိုလေ့လာပါမည်။ အမြဲလိုလိုအောက်ပါဖော်ပြချက်တွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ ယခုအခါ Microsoft Outlook ရှိသင်၏အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအလုပ်မလုပ်ကြောင်းပေါ်လာသည်။
ယခုသင်သည်သင့်အားအီးမေးလ်ပို့ရန်သို့မဟုတ်လက်ခံရန်အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဆာဗာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အမှားအယွင်းတစ်ခုသင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ဒီဟာတချို့ကိုကြည့်ကြမယ် ပထမ ဦး စွာဆာဗာနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၏ပြwithနာကိုကိုင်တွယ်ကြကုန်အံ့။
iTunes uninstall wont
ရှာဖွေရေးဘားသို့သွားပြီးသင်၏ network connection အတွက်ဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ncpa.cpland ကိုထည့်ပါ။ သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုညာဖက်နှိပ်ပါ။
Properties ကိုနှိပ်ပြီး TCP / IP ကို ​​Internet Protocol သို့ scroll လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မသေလျှင် check box ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ အဲဒါကိုရွေးပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါကပြtheနာကိုဖြေရှင်းသင့်တယ်။ ပြီးတော့ Outlook ကိုပြင်ဖို့သင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကမိုက်ကရိုဆော့ဖ် Outlook ၏ About အပိုင်းရှိဖိုင်ထဲကိုသွားပါ။ Info အောက်တွင် Account Settings ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင်ပြproblemsနာကြုံနေရတဲ့အီးမေးလ်ကိုရွေးပြီးပြုပြင်ရေးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်မြင်သည်အတိုင်း, ပြုပြင်အကောင့်လယ်ပြင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ Setting များကိုနှစ်ခါစစ်ဆေးပြီးအရာအားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန် Next ကိုနှိပ်ပါ။ Outlook ထို့နောက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သည်။
ပြီးပြီဆိုရင် Change Account link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ ဤချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီး၊ သူတို့ OK သေချာအောင်လုပ်ပါ၊ ပြီးနောက် Next ကိုနှိပ်ပါ။ Outlook ဟာအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပြီးစာတစ်စောင်လည်းပေးပါတယ်။
ထို့နောက်သင် Microsoft Outlook ကိုပိတ်ပြီး၎င်းကိုပြန်ဖွင့်လိုသည်။ Outlook ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလားစစ်ဆေးပါ။ မရရှိလျှင်, ငါအကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး option ကိုအီးမေးလ်အကောင့်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပြန်ထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။
dism အရင်းအမြစ် esd
Outlook အီးမေးလ်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ရုန်းကန်နေရပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်ပြproblemနာကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့ဖြေရှင်းသနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ၎င်းနှင့်ထောင်နှင့်ချီသောအခြားအကြံပေးချက်များ၊ လှည့်ကွက်များ၊ hacks များ၊ နည်းလမ်းများ၊ ပြင်ဆင်မှုများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Windows 10 သတင်းများအတွက် thewindowsclub.com ရှိကျွန်ုပ်တို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်ပါ။ ဤဆောင်းပါးကိုယခုအထောက်အကူပြုပြီဆိုပါကသင်၏လက်မကိုဆက်လက် ထား၍ သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဝကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အကြောင်းအရာအသစ်များထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ချန်နယ်စာရင်းတွင်စာရင်းသွင်းခြင်းကိုနှိပ်ပါ။
Outlook 2013 ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ။
ပြုပြင်ပါကိုယ်ရေးအကျဉ်းOutlook၂၀၁၀ ခုနှစ်၊Outlook 2013သို့မဟုတ်Outlook2016
InOutlook၂၀၁၀ ခုနှစ်၊Outlook 2013သို့မဟုတ်Outlook2016, ဖိုင်ရွေးပါ။
Account Settings> Account Settings ကိုရွေးချယ်ပါ။
အီးမေးလ်ဘောင်ပေါ်တွင်သင်၏အကောင့် (ပရိုဖိုင်း) ကိုရွေးပြီးနောက်ရွေးချယ်ပါပြုပြင်ပါ။
subnautica loading မ
လူတွေလိုလူကြိုက်အများဆုံးအပြောင်းအလဲကသူတို့စကားဝှက်ကိုပြောင်းဖို့၊ Outlook မှာဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ၊ ဒါပေမယ့်သင်လုပ်နိုင်တဲ့အခြားအပြောင်းအလဲများလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ငါပြောချင်တဲ့ဥပမာအချို့ကိုကြည့်ကြစို့။ ငါမှာ stingle နှင့် demo tutorial နှစ်ခုရှိတဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ backstage ကိုသွားတဲ့အခါငါမှန်ကန်တဲ့အကောင့်ကိုရွေးမယ်၊ ငါပြောင်းချင်တယ်၊ ပြီးတော့သင်ကအချက်အလက်တစ်ခုခုကြောင့်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးသင် Account Settings ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Account Settings အတွက်ဒီနေရာမှာခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သင် account settings ကိုပြန်လုပ်ပြီးအကောင့်တွေထပ်ထည့်၊ ဖယ်ထုတ်တာလား၊ ဒါကဘာလဲဆိုတာသေချာစေချင်တယ်။ လက်ရှိဆက်သွယ်မှုဆက်တင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲချင်သောကြောင့်ထိုခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ သင်အီးမေးလ်ကိုပြောင်းလဲလိုသောကြောင့်သင်အီးမေးလ် tab ရှိစေရန်သေချာစေလိုသည့် dialog box ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုအားပြောင်းလဲရန်ရွေးစရာအချို့ကိုကြည့်ကြစို့။ လက်ရှိမူလအကောင့်မှာ @kAlliance com မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုအဖြူရောင်အမှတ်အသားဖြင့်စက်ဝိုင်းအနက်ရောင်ဖြင့်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ် demo tutorial ကိုပုံသေ Outlook အကောင့်သို့ပြောင်းလိုပါက , အီးမေးလ်ကိုသာနှိပ်ပြီး set အဖြစ် default ကိုရွေးချယ်ပါ။ ယခုသူတို့သည်အစဉ်ကိုပြောင်းလိုက်သည်။ ၎င်းသည် stingled @k alliance com ကိုနှိပ်ပြီးလျှင်သင်ဒီမှာလာပြီးကျွန်ုပ်အားပြောင်းလဲနိုင်သောဖိုလ်ဒါကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ @klines ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအ ၀ င်တစ်ခုသာရှိသည့်အတွက်ယခုစာအသစ်များကိုသင်တင်ပို့သည့်နေရာတွင် folder တစ်ခုနှင့်အပိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ inbox ထဲတွင်အပိုဖိုင်တွဲများမရှိပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် inbox ထဲသို့ရွေ့လျားသော်လည်းငါအသစ်စက်စက်ဖိုလ်ဒါသင်ခန်းစာဖန်တီးနိုင်သည် ယခု inbox ကိုအမိန့်များသို့ပြောင်းချင်သည်၊ ယခုမှစပြီးဖြစ်ပျက်လာမည့်အီးမေးလ်အသစ်တည်နေရာမှာ၎င်းအပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောထိုဖိုင်တွဲသို့ပို့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဤတွင်ဖိုင်တွဲအသစ်များမရှိပါက Newfolder ကိုနှိပ်ပြီးဖိုင်တွဲအသစ်တစ်ခုကိုအမည်ပေးပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ကအီးမေးလ်များကိုထိုဖိုလ်ဒါသို့ပို့နိူင်ပါသည်။ ဤချိန်ညှိချက်များကိုမပြောင်းလိုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရှေ့သို့သွားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှထွက်ရန်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်လည်းအကောင့်များထဲမှတစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲလိုပေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်စကားဝှက်ကိုကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ အကောင့်များရှိစကားဝှက်ကိုသင်လိုချင်ကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ပြောင်းလဲပါ။ tingled @k alliancecomm's ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရရှိနိုင်သည့်ခလုတ်များကိုသာကြည့်ပြီးပြောင်းလဲမှုခလုတ်ကိုသင်ရွေးချယ်ပါ။ ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါပြောင်းလဲမှုအကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးသင်ဒီမှာပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများစွာရှိပါသည်။ အားလုံးကိုဖတ်ရန်သင်ဖတ်ရှုသည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကန့်သတ်ထားသောအဝင်စာပို့သောဆာဗာများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးသောသူများကိုသင်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲစေလိုသောသင်၏စီးပွားရေးတည်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်၏အမည်သင့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် မင်းရဲ့နာမည်ကိုမှားယွင်းတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးထည့်မိတယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းလက်ထပ်လိုက်ပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းကပိုပြီးတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဖြစ်ဖြစ်၊ တရားဝင်မဟုတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သင်ဝင်လာပြီး username ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ မင်းရဲ့ username ကကွဲပြားနေလို့ငါပြောသင့်တဲ့ user ကိုငါမပြောပါနဲ့။ သင်ရိုက်ထည့်လိုက်သောစကားဝှက်များကို ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလဲနိုင်သောလူကြိုက်အများဆုံးလိုင်းဖြစ်နိုင်ပြီးသင့်စကားဝှက်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရိုက်ထည့်ရန်တောင်းခံရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်လာရောက်ပြီးမှသာမှန်ကန်သောစကားဝှက်ကိုရေးရုံသာမက mypassword ကိုမှတ်မိသည့် box ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။ အကယ်၍ သင်အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်လျှင်သင်၏အကောင့်ချိန်ညှိချက်များအားလုံးမှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်၊ သို့သော်နောက်လာမည့်စမ်းသပ်မှုအကောင့်တွင်ဤအကောင့်ကိုအလိုအလျောက်စစ်ဆေးပါ။ click လုပ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မလုပ်မီနောက်တစ်ခုကိုသင်နှိပ်သောအခါသင်၏ account settings ကိုအလိုအလျှောက်စစ်ဆေးရန်၎င်းသည် set up ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်သည်နောက်ထပ်ချိန်ညှိချက်များကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤသူတို့၏ setting များကိုပြောင်းလဲရန်လိုမလိုကိုကြည့်ရန်“ နောက်ထပ်ချိန်ညှိချက်များ” ခလုတ်ကိုကြည့်ပါ၊ သင်အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့လျှင်သင်ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုဖန်တီးလျှင်သို့မဟုတ်သင်တပ်ဆင်လျှင်သင်လည်ပတ်မည့်နေရာများနှင့်သင်ယခုအပြောင်းအလဲအချို့ပြုလုပ်ရန်လိုကောင်းလိုသောနေရာများသည်အပြောင်းအလဲမလုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Cancel ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤတွင် Next ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်အကောင့်များကိုအလိုအလျောက်စစ်ဆေးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မှတ်သားထားပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ်ဝင်ပါလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ခုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်မပြုလုပ်ခဲ့သောသင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအပြောင်းအလဲများသည်အဆင်ပြေကြောင်းစစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင်အမှားများ tab ကိုတွေ့ပြီးအမှားများစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်ဆိုပါကအစိမ်းရောင် tick များကိုမျှော်လင့်ပါ။ ဘာမှားသွားပြီလဲ၊ ဘာကိုပြုပြင်ရမည်၊ ကျွန်ုပ်ဤအရပ်သို့သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ရွေ့သွားပြီး cl ose ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ပြီးပြီဟုဆိုသည်။ သို့သော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌အယ်လ်ရှိသည်ဟုအစပိုင်းတွင်ငါ့ကိုနည်းနည်းလှည့်စားစေသည် l သင့်အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်။ ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တွင်အကောင့်အသစ်တစ်ခုဖွင့်ထားပြီဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်၊ ယခုပြောင်းလဲမှုအကောင့် dialog box ၏ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးအရာအားလုံးကိုသတ်မှတ်သည်၊ သင်ပြုလုပ်သမျှအပြောင်းအလဲများမှာ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Finish ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင်အပြောင်းအလဲအားလုံးကအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဆက်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ပါ၊ သို့သော်ရွေးချယ်မှုသိပ်မရှိသောကြောင့် dialog box သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ သင်ပြောင်းလဲချင်သောအရာအနည်းငယ်ရှိပြီး၊ လူကြိုက်အများဆုံးမှာစကားဝှက်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲပြီးပါကသင်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲပြီးထိုနေရာတွင်အမှတ်အသားပြုပါသို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုမှတ်မိရန်နှင့်အကွက်ကိုအမှတ်အသားပြုရန်ထိုနေရာတွင်အမှတ်အသားကိုဖြုတ်ပါ။ အရာအားလုံးလည်း check လုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၌အစိမ်းရောင်စစ်ဆေးသောအမှတ်အသားတစ်ခုရရှိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သော်လည်းသင်မမှားပါက 'Errors' tab တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သင်ပိတ်ပြီးသွားပါပြီ၊ သင်သည် 'Change Account' dialog box ထဲ၌ရှိနေသည်။ ဆိုလိုတာကသင့်အကောင့်ကိုထူထောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှိသည်ဆိုပါစို့သင်လိုချင်သောအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှိသည်။ အရာအားလုံးအလုပ်လုပ်ပြီးပြီ။ ပြီးရင်ရုံပြီးသွားရင်သင်အနီးကပ်ကိုနှိပ်ပြီးပြန်သွားလျှင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပါ။ တစ်ခုခုမှားယွင်းစွာပြုမူနေတာကိုပိတ်လိုက်လျှင်ထိပ်ဆုံးညာဘက်ထောင့်ရှိ X ကိုသွားပြီး Outlook ကိုပိတ်ပြီးပြန်လည်အသက်ဝင်စေပါ။ သင့်ရဲ့အကောင့်ထဲကိုလူတိုင်းကောင်းကောင်းပြောနိုင်တာတစ်ခုပါ။ အပြောင်းအလဲများ၊ ဥပမာစကားဝှက်သည် Ren ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏အဝင်သို့မဟုတ်အထွက်ဆာဗာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်လျှင်မြန်စွာသွားပြီးသင်လမ်းလျှောက်ရုံသာရှိနိုင်သည်။
Outlook 2013 ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့နေဆဲလား။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်ထောက်ခံမှုမရှိတော့ရုံး၂၀၁၃။ အဆုံးထောက်ခံမှုအပြောင်းအလဲများသည် Office 365 Pro Plus၊ Small Business Premium၊ စီးပွားရေး၊ Project Pro နှင့် Visio Pro subscriptions များတွင်အကျုံးဝင်သည်။ များအတွက်အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးအသစ်ပြောင်းခြင်းများ၂၀၁၃ထုတ်ကုန်Aprilပြီလ 10, 2018 အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။၂၄ ဇန်နဝါရီ 2019
ဤဆောင်းပါး၏သင်ခန်းစာတွင် Outlook 2013 ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ဆာဗာများနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကိုဖော်ပြပါမည်။
ပထမ ဦး စွာ Outlook ကိုဖွင့်ပြီး Files tab ကိုသွားပြီး Info Account Settings Account Settings သို့သွားပြီး Email tab သို့သွားပြီးအကောင့်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန် New ကိုနှိပ်ပါ။ Outlook ကိုအလိုအလျောက်တည်ဆောက်မည့်အစားကျွန်ုပ်တို့အကောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်လိုသည်။ ဒါကြောင့် manual setup သို့မဟုတ်နောက်ထပ် server အမျိုးအစားများကိုသာရွေးချယ်ပြီးနောက်လာမည့် ၀ င်းဒိုးပေါ်ရှိ Next ကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ POP သို့မဟုတ် IMAP ကိုရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများမှရွေးချယ်လိုပါက account setup စာမျက်နှာရှိ Next ကိုနှိပ်ပါ။
tmp cvr ဖိုင်များ
သတင်းအချက်အလက်အချို့ဖြည့်ပါ။ သင်၏အမည်လယ်ကွင်းအတွက်၊ သင်၏အမည်ကိုအီးမေးလိပ်စာအကွက်ထဲထည့်ပါ။ ဆာဗာသတင်းအချက်အလက်အောက်တွင်သင်စာရင်းဖွင့်လိုသည်မှာ Pop3 သို့မဟုတ် IMAP ကိုရွေးချယ်ရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ဆာဗာများသည်ပရိုတိုကောနှစ်မျိုးစလုံးကိုထောက်ခံသည်၊ ထို့ကြောင့်ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင်ရွေးချယ်မည့်မည်သည့် protocol ကိုသင့်အပေါ်မူတည်သည်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာဝင်လာတဲ့ mail server အတွက် box ထဲမှာ IMAP ကိုရွေးလိမ့်မယ်။ IMAP ကိုရွေးလိုလျှင် IMAP ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ သို့မဟုတ် protocol အဖြစ် Pop ကိုရွေးချယ်ပါကသင်၏ဒိုမိန်းအမည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ။ ထို့ကြောင့် IMAP ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင့်ဖြစ်ပါကပရိုတိုကောကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ထွက်ရှိသောအီးမေးလ်ဆာဗာအတွက်ကျွန်ုပ်၏ဒိုမိန်းထဲကိုဝင်ရောက်မည် SMTP ကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့ domain name ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဤဒိုမိန်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ဒိုမိန်းသည် example.com ဖြစ်သဖြင့်အထောက်အထားများအတွက် SMTPdot example.com ကိုကျွန်ုပ်ထည့်ပါမည်။ အသုံးပြုသူအမည်၏ပထမအပိုင်းကိုဖြည့်ရန်မလုံလောက်ပါ၊ သင်၏အီးမေးလိပ်စာအပြည့်အစုံကိုရိုက်ထည့်ရမည်၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာအပြည့်အစုံကိုကျွန်ုပ်လျှို့ဝှက်နံပါတ်အဖြစ်ရိုက်ထည့်ပါ၊ သင်ရွေးချယ်သောစကားဝှက်ကိုထည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများပေါ်တွင်အကောင့်တစ်ခုကိုဖွင့်ထားပါက၊ 'ရှေ့သို့' ကိုမနှိပ်မီနောက်ထပ်ဆက်တင်အနည်းငယ်ပြောင်းလိုပါလိမ့်မည်။
ဤတွင် 'More Settings' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ 'အထွက်ဆာဗာ' tab ကိုနှိပ်ပြီး၊ ငါ၏အထွက်ဆာဗာကိုစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအကွက်ကိုအမှတ်အသားပြုပါ။ ထပ်မံ၍ သင်လိုချင်သည့်နောက်လာမည့်ဆာဗာကဲ့သို့တူညီသောချိန်ညှိချက်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုပြောသောရေဒီယိုခလုတ်ကိုလည်းရွေးချယ်သင့်ပါသည် Advanced tab ရှိ tab tab သည် IMAP Port 143 မှတစ်ဆင့်ဝင်လာသောမေးလ်ဆာဗာနှင့်ချိတ်ဆက်မိလျှင်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Pop Port 1 10ကိုရွေးချယ်ပါကဝင်လာသည့်မေးလ်ဆာဗာကိုဆက်သွယ်ပါကဆိပ်ကမ်းနံပါတ်သည်အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာသင် SSL သုံးပြီးဝင်လာသော IMAP server ကိုချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ အထွက်မေးလ်ဆာဗာဆက်တင်များအတွက် SSL ကိုရွေးချယ်သောအခါ port နံပါတ်ပြောင်းသွားသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် SMTP server သို့စာဝှက်မထားသည့်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုပါကသင်သည် port 587 ကိုသုံးချင်သည်၊ သို့သော်သင် encrypt လုပ်ထားသော SSL ဆက်သွယ်မှုကို SMTP နှင့်ဆက်သွယ်ပါက ဆာဗာတွင်သင်ဤသင်ခန်းစာအတွက် port 465 ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ SSL မှတဆင့် ဆက်သွယ်၍ port 465 ကိုအသုံးပြုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ settings အားလုံးကိုလုပ်ပြီးသည်နှင့် OK ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Next Outlook 2013 ကိုနှိပ်ပါ။ SSL ဖြင့်ဆာဗာကိုဆက်သွယ်လိုလျှင်စမ်းသပ်မှုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပါ၊ သင်ဆာဗာသို့သင်ဆက်သွယ်နေကြောင်းအတည်ပြုရန်မဖြစ်နိုင်သည့်လုံခြုံရေးလက်မှတ်ကို အသုံးပြု၍ သွားနေကြောင်းသတိပေးမှုရနိုင်သည်။ သင်၏ဒိုမိန်းအမည် inimap.gmail.com ကို အသုံးပြု၍ ဆာဗာကို SSL ဖြင့်ထပ်မံချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသာလျှင်ဤအရာဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းကိုရှင်းပြရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ဤသင်ခန်းစာအတွက်သက်ဆိုင်ရာအထောက်အကူဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည့် server သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ နောက်ထပ်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်တစ်ခုရဤသည် SMTP server အတွက်ဖြစ်သည်။
ဤအရာသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းသင်သိလိုပါကဤဆောင်းပါး၏သင်ခန်းစာ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအထူးအထောက်အကူဆောင်းပါးကိုစစ်ဆေးပါ။ Yes ကိုနှိပ်ရုံဖြင့် Outlook 2013 သည်ဝင်လာသည့်မေးလ်ဆာဗာနှင့်ဆက်သွယ်မှုမြင့်တက်လာကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ စာမေးပွဲနှစ်ခုစလုံးအောင်မြင်ခဲ့လျှင်၊ အစိမ်းရောင်ကွက်လပ်နှစ်ခုအစားနှစ်ခုစလုံးသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးမအောင်မြင်လျှင်အစိမ်းရောင်အမှတ်အသားအစားအနီရောင် X တစ်ခုကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်စာမေးပွဲနှစ်ခုစလုံးအောင်မြင်ပါကအီးမေးလ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ မှန်ကန်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သောအီးမေးလ်အကောင့်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်အကောင့်ကို Ican ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွန်ုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှမှာဖိုင်သို့ပြန်သွားပါသည်။ Info ကိုနှိပ်ပါ။ Account Settings ကိုနှိပ်ပါ။ Account ချိန်ညှိချက်များအီးမေးလ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ငါပြောင်းချင်သောလိပ်စာနှင့်ဤနေရာတွင်ပြောင်းလဲမှုကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ငါသူတို့အကောင့်ဖွင့်လှစ်စဉ်အတွင်းငါအမှားများကိုဖြေရှင်းရန်ငါလိုအပ်သောမည်သည့် settings ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါကဒီသင်ခန်းစာအတွက်ပါပဲ
အွန်လိုင်း subscript excel
Office application အားလုံးကိုပိတ်ပါ။
အမျိုးအစား View ကိုရွေးပါ။
Programs အပိုင်းမှာတော့ Program ကို Uninstall လုပ်ပါ။
Microsoft Office ကို Right-click နှိပ်၍ Change ကိုနှိပ်ပါ။
Online Repair သို့မဟုတ် Repair ကိုရွေးပါ။
ဟေး၊ မMatthewဲ၊ ဒီမှာဒီဆောင်းပါးမှာငါ Outlook ကိုဘယ်မှာဖွင့်ရမလဲ၊ OST ဖိုင်မရနိုင်တဲ့အလားဒီ error ပြgetနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးဖြေရှင်းနည်းကိုပြမယ်။
ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ၊ သင် account ဖွင့်တော့မယ်ဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် Outlook ကိုအရင်ပိတ်ကြရအောင်။ ဖွင့်ပြီးအမှားကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကိုမပိတ်နိုင်အောင်သေချာအောင်လုပ်မလားဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။ Control Panel ကိုအရင်သွားမယ်၊ ဒီနေရာမှာ Mail 32 ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Mail 32 ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး Fitness 16 output ကိုတွေ့ရမယ်၊ သင်အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်သည်ကိုမတွေ့ပါက၊ ထိပ်ညာဘက်ထောင့်မှာကြည့်ရှုပါ။ Mail ကိုသာရှာဖွေပြီး၊ အကယ်၍ သင်သည် Outlook များစွာတပ်ဆင်ထားပါက၊ ၂၀၀၇ နှင့် ၂၀၁၆ နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်း၌ Heremail ရှိနေစဉ်မှန်ကန်သော email option ကိုနှိပ်ပြီး Mail 32 Output ကိုကြည့်ပါ။ ၂၀၁၆ တွင် ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၆ တွင်လုပ်ကိုင်နေသည်။ OK ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သို့မှသာ ost ဖိုင်သည်ယိုယွင်းပျက်စီးသွားပြီးပရိုဖိုင်းပျက်စီးသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိုဖိုင်းအသစ်တစ်ခုဖန်တီးကာသင်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာအခုအကျင့်ပျက်နေပြီ။ ငါလုပ်မှာကအသစ်တစ်ခုကိုငါထပ်ထည့်နိုင်သည်။ နောက်တစ်ခုကိုသင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အသစ်ဆိုပါစို့။ သင်ဤအရာကိုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်သင်၏အကောင့်ကိုချက်ချင်းဖွင့်ရန်အချက်ပြလိမ့်မည်၊ များသောအားဖြင့် Exchange Server oeexchange activesync ကိုပံ့ပိုးသော Outlook.com အီးမေးလ်များသို့မဟုတ် Office 365 အကောင့်များနှင့်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်သင်ဂျီမေးလ်အကောင့်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုပါကသင်ကိုယ်တိုင်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ Office 365 Set up account ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ်သင်ထပ်မံထည့်နိုင်လျှင်၊ ယခုငါကိုနှိပ်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်ပရိုဖိုင်းနှစ်ခုရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ ဤအသစ်သည်အသစ်ဖြစ်သည်။ အကျင့်ပျက်ပြားသွားသည့်အဟောင်းတွင် OST ဖိုင်ရှိရမည်။ ဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ - သင်သည်ဤပရိုဖိုင်းကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည့်ပရိုဖိုင်းအသစ်ကိုသင်သေချာစွာရွေးချယ်ရန်သေချာစေရန်၊ အကယ်၍ သင်၌အရေးကြီးသောအီးမေးလ်ရှိသည်ဟုသင်ယူဆပါက၎င်းနှင့်ဆာဗာနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းမရှိသောကြောင့်သင်ထွက်ခွာနိုင်သည် Backup လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုမင်းမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်ရင်၊ ဆက်လုပ်ပါ၊ ဖယ်ရှားလိုက်ပါ၊ ဒီဟာကိုဖျက်ပစ်ဖို့အခုချက်ချင်းလုပ်ပါ၊ ဒါကြောင့်အသစ်ဖြစ်နေသည်။ ဒါကြောင့်ငါ Outlook ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ၊ ငါ့ရဲ့အကောင့် setup နဲ့ပရိုဖိုင်းအသစ်ကိုဖွင့်ပြသင့်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ Outlook ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်တော့မယ်၊ ထပ်မံ၍ ၎င်းကိုပိတ်ပြီးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Outlookdကိုဖွင့်သည်။ သင်လုပ်သောအခါအောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဤဆောင်းပါးအားသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
နောက်တခါပြတင်းပေါက်အသစ်ကိုသင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ယခု ၀ င်းဒိုးသည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖွင့်ထားသောပရိုဂရမ်များစာရင်းကိုပြသည်။ Outlook label အမည်တပ်ထားသော option ကိုရွေးချယ်ပြီး dropdown မှ ‘End Task called ဟုခေါ်သော option ကိုရွေးချယ်ပါ။ Outlook ကိုယခုပိတ်ထားလိမ့်မည် ထို့နောက် Outlook ကိုပြန်လည်စတင်ပြီး၎င်းသည်ယခင်ကကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုကြည့်နိုင်သည်။
Outlook 2013 ကိုစက်ရုံတည်ဆောက်မှုသို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း။
လက်ရှိပရိုဖိုင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်၊ ဖယ်ရှားရန် / ဖျက်ရန်ကိုနှိပ်ပါ။ ဖယ်ရှားပြီးသည်နှင့်အသစ်တစ်ခုပရိုဖိုင်းကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အီးမေးလ်အကောင့်ကိုပြုပြင်ရန် Add ကိုနှိပ်ပါ။ အထက်ပါအဆင့်များကကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်နောက်ထပ်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအဖြေကအထောက်အကူပြုသလား။
Outlook 2013 ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။
မဆိုကူညီတန်ဖိုးထား။ ဒီချည်ကိုသော့ခတ်ထားသည်။ သင်မေးခွန်းကိုနောက်ဆက်တွဲသို့မဟုတ်မဲပေးရန်အထောက်အကူအဖြစ်မဲပေးနိုင်သည်၊ သို့သော်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်မပြန်နိုင်ပါ။ Outlook ကိုသင်ပြန်လည်ထည့်သွင်း။ မရ။ ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းမှာအကြောင်းအရာနှင့် amp အားလုံးကိုချန်ထားသင့်သည်။ တစ် ဦး တည်းစိတ်ကြိုက်။ အပြည့်အဝအမှားမက်ဆေ့ခ်ျကိုကဘာလဲ? ၀ င်းဒိုးကိုမဖွင့်နိူင်သောပြissuesနာများစွာရှိသည်။
Microsoft Outlook ဆက်တင်များကိုမည်သို့ပြန်လည်သတ်မှတ်မည်နည်း။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် Outlook ကိုစက်ရုံဆက်တင်များ (သို့ပထမအကြိမ်လည်ပတ်မှု) သို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ပါ။ အဆင့် ၁ - သင်၏ Microsoft Outlook ကိုပိတ်ပြီး၊ထိန်းချုပ်ရာနေရာသင့်ကွန်ပျူတာထဲရှိအဆင့် ၂။ ယခုသင် Control Panel ထဲ ၀ င်ပါသည်။ အဆင့် ၃ - Mail Setup ပေးတဲ့ dialog box ထဲမှာကျေးဇူးပြုပြီးProfiles ခလုတ်ကိုပြပါ။